Dowlada Soomaaliya oo safaarad ka furatay dalka Azerbaijan - Jowhar somali news leader
Home NEWS Dowlada Soomaaliya oo safaarad ka furatay dalka Azerbaijan
Dowlada Soomaaliya oo safaarad ka furatay dalka Azerbaijan
Wasiirka Arrimaha Dibadda Azerbaijan Jeyhun Bayramov ayaa warqadaha aqoonsi danjirenimo ka guddoomiyaha Safiirka Soomaaliya ee dalkaas Jaamac Cabdullaahi Maxamed si uu uga shaqeeyo xiriirka labada Dowladood.
Bayramov waxa uu sheegay in Danjire Jaamac ay kawada hadleen xaaladaha labada Dowladdood sidii loo xoojin lahaa iskaashiga labada dhinac iyo si waafaqsan shuruucda Caalamiga ah labada dal isu kaashadaan.
Jeyhun Bayramov Wasiirka Arrimaha Dibadda Azerbaijan ayaa Danjiraha Dowladda Federaalka u dirsatay dalkaas ka xog-wareystay Xaaladda Soomaaliya, horumarka laga gaaray wadahadalka Doorashooyinka, Amniga iyo arrimo kale.
“Azerbaijan waxa ay xoogga saareysa xoojinta xiriirka Soomaaliya ee saaxiibtinamada ku dhisan, booska ay joogto way nagu taageertaa dabcan sidaas oo kale ayaan u nahay, waxa aan rajeynayaa in Danjiraha cusub uu sii wadi doono howlaha horyaalla” ayuu yiri Wasiirka Arrimaha Dibadda Azerbaijan.
Azerbaijan waxa ay kamid tahay dalalka gacansaarka la leh Turkiga, dagaal ku saleysan isku qabsi dhul lahaanshiyo ayay la gashay Dalka ay xad-wadaaagga yihiin ee Armenia balse garab iyo gaashaan waxaa u noqday Turkiga oo Soomaaliya cilaaqaad wanaagsan la leh.
Previous articleHowlgalo ciidamada Gorgor ay ka sameeyeen gobolka Sh/hoose
Next articleMacron will reset relations with UK if Johnson ‘keeps his word’ on Brexit